महिना दिनदेखि चार हजार बढी परिचालक कर्मचारी आन्दोलनमा
२o७५ असोज ३ बुधबार / Wednesday, September 19, 2018
२o७४ फागुन १ मंगलबार
काठमाडौं । विगत एक महिनादेखि आन्दोलनरत सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघको आन्दोलन अझै पनि जारी छ । सरकारले आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको माग अझै सुनेको छैन ।
आफ्ना मागहरु जायज र सान्दर्भिक भएको बताएका कर्मचारी संघले माग पूरा नभएसम्म आनदोलन जारी हुने बताएका थिए । तर ३१ दिन लामो समय बित्दा पनी उनीहरुको माग पूरा गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्नसकेको छैन । “हिजो काम लाउने सरकारले आज बानेश्वरको बीच सडकमा आन्दोलन गरी सडक जाम गर्न बाध्य बनाएको छ”, नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघ आन्दोलन परिचालन संयोजक मनिषा विमलीले भनिन् ।
नेपाल अधिराज्यभरबाट नै ४६ सयभन्दा बढी संख्यामा रहेका सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघ महिना दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । गर्भवती र काखीमा बच्चा च्यापेर आन्दोलनमा उत्रेका सामाजिक परिचालकहरु आफ्ना मागहरु जायज भएकाले सरकारले पूरा गनैपर्ने बताउँछन् ।
१४ जना गर्भवती र १० जान काखीमा बच्चा च्यापेर आन्दोलनमा होमिएका उनीहरुको माग सरकाले सुन्नुपर्ने हो र जायज मागहरु पूरा गर्नुपर्ने हो तर सरकार किन लाचार र लज्जास्पद बन्दै छ भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् उनीहरु । ‘आन्दोलनका क्रममा केही आमाहरुले कोख गुमाउनुपरेको छ, कोख गुमाएका आमालाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिन सक्छ ?’, संयोजक विमलीले प्रश्न गरिन् ।
काठमाडौँको जाडो माघ महिना सडकमा आन्दोलन गरेरै बिताएका उनीहरु आफ्ना माग पूरा गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । आन्दोलन संयोजक विमलीले भनिन्, ‘गरिबको गाँस खोसेर घोषणापत्र बाँड्ने सरकार हामीलाई हाम्रो ठाउँ र योग्यता अनुसार काममा फर्काऊ, तिमीलाई पाल्ने स्रोत पनि हामी नै जुटाउँछौँ ।’
बाहिरबाट आएकालाई बस्न खानकै समस्या
नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघको आन्दोलन आज ३१ औँ दिन चलिरहेको छ । सिन्धुली जिल्लाबाट आएकी हिरा थापा होटलमा बस्न महङ्गो भएकोर खर्च पनि धेरै नभएकाले आफू चाँडै घर फर्किने बताउँछिन् ।
आन्दोलनकै लागि आफन्तकहाँ बस्दै आएकी सिरहाकी कुन्तीदेवी कति दिन बस्नुपर्ने हो, टुंगो नभएकाले आफन्तको बस्न शरम भएको बताउँछिन् । हिरा र कुन्ती त उदाहरण मात्र हुन् । काठमाडौँ बाहिरबाट आएका सबैलाई समस्या परेको छ ।
काठमाडौँै महङ्गो छ । यही बस्ने र काम गर्नेलाई त समस्या हुन्छ यहाँ । अझ आन्दोलन गरेर आफ्नो काममा पुनः फर्किने माग गर्दै आन्दोलनमा सहभागी बन्न विभिन्न जिल्लाबाट काठमान्डौँ आएका उनीहरुलाइ बस्न र खानको समस्या परेको छ ।
त्यस्तै, आन्दोलनमा सहभागी बन्न बाहिरी जिल्लाबाट आएका कतिपय वृद्धाश्रममा समेत बस्ने गरेको सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघले जानकारी दिएको छ । गत पुस १४ गते बसेको राज्यमन्त्रीस्तरीय बैठकले नौ वर्षसम्म काम गरेका सामाजिक परिचालक कर्मचारीहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट आउन माग गर्दै सेवाबाट हटाएको थियो ।
विगत ३१ दिनदेखि उनीहरु आन्दोलनमा छन् । उनीहरुको माग पूरा गर्न सरकारले कहिले चासो दिने ?
के हो उनीहरुको माग ?
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सेवाबाट हटाएको विरोधमा नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघको आयोजनामा उनीहरुले पुनःस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । आफूहरुलाई राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयले हटाएकाले जागिरमा पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलन गरिरहेको संघले बताएको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलको गत पुस १४ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालकका रुपमा कार्यरतलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयको विरुद्धमा संघले आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत विसं २०६६ देखि स्थानीय तहमा मन्त्रालयले सामाजिक परिचालक राखेको थियो । देशभरि करिब चार हजार ७०० सामाजिक परिचालक कार्यरत छन् । उनीहरुले मासिक रु १२ हजार तलब पाउने गर्दथे ।
चालकहरुको आन्दोलनले यातायात ठप्प
बारा । नेपाल स्वतन्त्र सवारीचालक संघर्ष समितिले मंगलवारदेखि सुरु गरेको आन्दोलनका कारण सार्वजनिक यातायात ठप्प भएको छ । सरकारले जारी गरेको सवारी ऐन यातायात मजदुर मैत्री नभएको भन्दै संघर्षमा उत्रिएको
सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी आन्दोलनमा
काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । लोकतान्त्रिक कानुनी राज्यमा विधिको शासनको अपहेलना र बेवास्ता गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट पटक–पटक भएका मुद्दाको फैसल्ला र त्यसबाट बनेको सर्भिस ल वर्षौँसम्म
महोत्तरीका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा
महोत्तरी । महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । गाउँपालिकाले गत वैशाखदेखिको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा नदिएको विरोधमा स्वाथ्यकर्मीले सो गाउँपालिकामा मङ्गलबारदेखि तालाबन्दी गरेका छन् । पटक–पटक गाउँपालिका, स्वास्थ्यकर्मी
सरकार र चिकित्सक संघबीच सहमति, एकसाताका लागि आन्दोलन स्थगित
काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादव र नेपाल चिकित्सक सङ्घबीच सोमबार भएको वार्तामा सङ्घले उठाएका माग सम्वोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार तयार भएको छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको
पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि फिर्ता नलिए अग्रिम टिकट बुकिङ्ग नगर्ने महासंघ चेतावनी
निर्मलाको हत्यारालाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्दै काँग्रेसको प्रदर्शन
३३ किलो सुन प्रकरण : एसपी खनाल पनि साधारण तारेखमा रिहा
उपराष्ट्रपति पुन बुधबार चीन भ्रमणमा जाँदै
पैसा असुली गरेपछि कोटेश्वर र काँडाघारी प्रभागका १४१ प्रहरीको एकै साथ सरुवा
रूसद्वारा विमान आक्रमण प्रकरणमा इजरायली राजदूतसँग सोधपुछ
रनवे मर्मतपछि विमानस्थल सामान्य अवस्थामा
निर्माण व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्षमा चार जनाको उम्मेदवारी
टि-२० विश्वकपको छनौट प्रतियोगिता खेल्न १८ सदस्यीय प्रारम्भिक टिम छनौट, को को परे ?
धावनमार्गमा समस्या आएपछि विमान आकाशमै ‘होल्ड’
सिटी एक्सप्रेसको ९० दिने 'लखपति एक्सप्रेस' योजना सार्वजनिक
भारतमा भएको अन्डर १९ को चौकोणीय सिरिज भारतको 'बि' टिमले जित्यो
विश्वकप विजेता फ्रान्सका कप्तान लोरिसलाई जेल सजाय !
यु-१९ नेपाल भर्सेज भारतीय नेशनल क्रिकेट एकेडेमी : नेपालले टस जित्यो, पहिला बलिङ गर्दै
अफगानिस्तानद्वारा नेपाललाई २४५ रनको लक्ष्य, ओपनर रियाज हसनले खेले शतकीय पारी
एशिया कप क्रिकेट आजदेखि सुरु हुदै, यस्तो छ खेल तालिका
युभेन्टसको जितमा रोनाल्डोको २ गोल, २८औ प्रयासमा सिरी ए मा गरे गोल
श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषदको अध्यक्षमा नमराज ढकाल विजयी
सिमरा विमानस्थलमा रात्री उडान सेवा सुरु हुने